Trump oo erayo laga haboon yahay ku tilmaamay Afrika, Haiti iyo El Salvador - Worldnews.com
Trump oo erayo laga haboon yahay ku tilmaamay Afrika, Haiti iyo El Salvador
Madaxweynaha waddanka Mareykanka, Donald Trump, ayaa erayo laga haboon yahay waxa uu ku tilmaamay wadammada Afrika, Haiti iyo El Salvador, mar uu gaashaanka u daruurayay heshiis dhanka socdaalka ah oo ay labada xisbi ee waa weyn ee dalkaasi ay isla ogolaadeen.
Mr Trump ayaa xildhibaano uu kula shiray Aqalka
"si Muslimka xagjirka ah looga ilaaliyo Mareykanka"
Trump oo amray in baaritaan lagu sameeyo Muslimiinta Mareykanka galaya
Madaxweynaha cusub ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqay xayiraado dhanka socdaalka ah "si muslimka xagjirka ah looga ilaaliyo Mareykanka". Wuxuu saxiixay amar guud, sida...
Madaxweynaha cusub ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqay xayiraado dhanka socdaalka ah "si Muslimka xagjirka ah looga ilaaliyo Mareykanka". Wuxuu saxiixay amar ku aaddan...
Trump oo saxiixay amar 'lagu kala shaandheynayo muslimiinta Mareykanka u safraya'
Seddax qobol ayaa taageeray dacwad uu gudbiyay maamulka gobolka Hawaii oo sharciga la tiigsaday go'aankii Donald Trump uu ku mamnuucay Muslimiinta lix dal. Donald Trump...
Madaxweynaha cusub ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqay xayiraado dhanka socdaalka ah "si Muslimka xagjirka ah looga ilaaliyo Mareykanka". Haddaba sidey arrintaasi u saameyn...
El Salvador oo dilka uu caadi ka yahay oo markii ugu horeysay aan maalin qofna ...
Booliska dalka El Salvador wuxuu sheegay in dalka aanan qofna lagu dilin 24kii saacadood ee aan soo dhaafnay. Arrintaasi ayaa aad u yar in lagu arko dalkaasi burcadda ay ku...
Booliska dalka El Salvador wuxuu sheegay in dalka aanan qofna lagu dilin 24kii saacadood ee aan soo dhaafnay. Arrintaasi ayaa aad u yar in lagu arko dalkaasi burcadda ay ku badan yihiin. El Salvador wuxuu ku jiraa dalalka dilalka ugu badan ay ka dhacaan caalamka, sida ay sheegtay Qaramada Midoobeey. Toban qof ayaa maalinkastaa lagu dili jiray dalkaasi tan iyo intuu sanadkan...
Maxaa ka soo bixi kara baadhitaanka caafimaad ee lagu samaynaayo madaxweynaha Maraykanka?
MAXAA KA SOO BIXI KARA BAADHITAANKA CAAFIMAADKA TRUMP? BY ABDIQAADIR MOHAMED IBRAHIM. Malinimada Jimcaha ah waxaa madaxweyne Trump lagu wadaa in uu maro baaritaankii ugu horeeyay oo caafimaad oo xagga maskaxda ah tan iyo intii uu xilka qabtay. GOORMEY BILAABATEY DOODA CAAFIMADKA MADAXEYNE TRUMP? Hadaba Doodda la xiriira caafimaadka Trump maaha mid cusub, waxayna soo billaabatay...
Dibadbaxayaal Madaxwayne Trump ku tilmaamay Cunsuri
Dibadbaxyo dhowr ah ayaa ka dhacay magaalooyiinka Mareykanka taasi oo looga soo horjeedo hadalo Gef ah oo ka dhan ah Haiti, El Salvador iyo wadamada qaarada African oo la sheegay in uu jeediyay madaxwayne Trump. Dibadbaxyadani ayaa magaalooyiinka ay ka dhaceen waxaa ka mid ah New York, Los Angeles iyo West Palm Beach. Dibadbaxayaasha magaalooyiinka New York, Los...
Xaakim hor istaagay xayiraadda socdaalka ee Trump
Xaakim heer federaal ah oo ka shaqeeya gobolka Hawaii, ayaa si kumeelgaar ah u joojiyay mamnuucidda uu madaxweyne Trump saaray dadka ka yimaada 6 dal oo Muslim ah. Amarka Trump oo dhaqangeli lahaa 7-da aroornimo saacadda geeska Afrika, ayaa waxaa dacwado ka dhan ah laga furay 7 gobol oo kala ah Washington, New York, Minnesota, Oregon, Massachusetts, Maryland iyo Hawaii. Dadkan...
Boqollaal qaxooti ah oo lagu xiray dalka Mareykanka
Dadka u ololeeya arrimaha qaxootiga ayaa sheegay in boqollaal qof oo muhaajiriin ah lagu soo qabqabtay howlgallo Mareykanka ka dhacay. Saraakiisha waaxda socdaalka ee Mareykanka waxay sheegeen in howlgallada ay ka fuliyeen Los Angeles, Atlanta, Chicago, New York, Texas iyo North-Carolina. Arrintaasi ayey ku tilmaameen inay qeyb ka tahay u qogaansamidda shuruucda Trump uu soo...